Ihe anyị maara gbasara COVID-19 Omicron: Onye isi ala kọwara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa » Ihe anyị maara gbasara COVID-19 Omicron: Onye isi ala kọwara
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • WTN
20 min gụọ
Onye isi ala South Africa Cyril Ramaphosa
Edere ederede nke Onye isi ala Cyril Ramaphosa na-agwa mba South Africa okwu banyere ọganihu na mbọ iji gbochie ọrịa COVID-19 taa.
Onye isi ala South Africa Cyril Ramaphosa bụ onye isi ala na onye isi gọọmentị South Africa. Onye isi ala na-eduzi ngalaba isi nke gọọmentị na ọ bụ onye isi ọchịagha nke South Africa National Defence Force.
Taa ọ kwalitere ndị South Africa na ụwa gbasara ọnọdụ na-apụta na ụdị Omicron nke COVID-19.
Onye isi ala Cyril Ramaphosa kwuru:
Ndị otu m South Africa,
N'izu gara aga, ndị ọkà mmụta sayensị anyị chọpụtara ụdị ọhụrụ nke coronavirus na-ebute ọrịa COVID-19. Òtù Ahụ Ike Ụwa akpọọla ya Omicron ma kwupụta na ọ bụ 'ụdị nchegbu'.
Ebu ụzọ kọwaa ụdị Omicron na Botswana na emesịa na South Africa, ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtakwala ikpe na mba ndị dị ka Hong Kong, Australia, Belgium, Italy, United Kingdom, Germany, Austria, Denmark na Israel.
Nchọpụta mmalite nke ụdị dị iche iche a bụ n'ihi ọmarịcha ọrụ nke ndị ọkà mmụta sayensị anyị na South Africa na-arụ na ọ bụ kpọmkwem n'ihi ntinye ego nke Sayensị na Innovation na Ngalaba Ahụike anyị mere n'ikike nlekọta genomic anyị.
Anyị bụ otu n'ime mba dị n'ụwa guzobere netwọk onyunyo na obodo niile iji nyere anyị aka nyochaa omume COVID-19.
Nchọpụta mmalite nke ụdị a na ọrụ nke abanyelarị n'ịghọta ihe onwunwe ya na mmetụta ndị nwere ike ime pụtara na anyị dị njikere nke ọma ịzaghachi na ụdị dị iche iche.
Anyị na-asọpụrụ ndị ọkà mmụta sayensị anyị niile bụ ndị a ma ama n'ụwa niile na ndị a na-akwanyere ùgwù ma gosipụta na ha nwere ihe ọmụma miri emi banyere ọrịa na-efe efe.
Enwere ọtụtụ ihe anyị maralarị banyere ụdịdị ahụ n'ihi ọrụ ndị sayensị anyị na-arụ na nleba anya genome.
Mbụ, anyị maara ugbu a na Omicron nwere mmụgharị dị ukwuu karịa ụdị ọ bụla gara aga.
Nke abuo, anyị maara na a na-achọpụta Omicron ngwa ngwa site na nnwale COVID-19 dị ugbu a.
Nke a pụtara na ndị mmadụ na-egosipụta akara COVID-19 ma ọ bụ ndị ha na onye nwere COVID-19 na-akpakọrịta, ka kwesịrị ịnwale ya.
Nke atọ, anyị maara na ụdị a dị iche na ndị ọzọ na-ekesa variants nakwa na ọ dịghị ihe jikọrọ ya na Delta ma ọ bụ Beta variants.
Nke anọ, anyị maara na ụdị dị iche iche na-ahụ maka ọtụtụ ọrịa ndị a chọtara na Gauteng n'ime izu abụọ gara aga ma na-apụta ugbu a na mpaghara ndị ọzọ niile.
A ka nwere ọtụtụ ihe gbasara variant nke anyị na-amaghị, na ndị ọkà mmụta sayensị na South Africa na n'ebe ndị ọzọ n'ụwa ka na-arụsi ọrụ ike iji guzobe.
N'ime ụbọchị na izu ole na ole na-abịa, ka data ndị ọzọ na-adị, anyị ga-enwe nghọta nke ọma:
ma Omicron na-ebunye ngwa ngwa n'etiti ndị mmadụ,
ma ọ na-abawanye ohere nke reinfection,
ma variant na-ebute ọrịa ka njọ, na,
Kedu ka ọgwụ mgbochi ugbu a si dị irè megide ụdị Omicron.
Nchọpụta Omicron dabara na ịrị elu mberede na ọrịa COVID-19.
Mmụba a gbadoro ụkwụ na Gauteng, n'agbanyeghị na ikpe na-arị elu na mpaghara ndị ọzọ.
Anyị ahụla nkezi nke ikpe ọhụrụ 1,600 n'ime ụbọchị asaa gara aga, ma e jiri ya tụnyere naanị ikpe 7 kwa ụbọchị n'izu gara aga, yana ikpe 500 kwa ụbọchị n'izu gara aga.
Oke ule COVID-19 nke dị mma esiwo na ihe dịka pasentị abụọ ruo pasentị itoolu n'ihe na-erughị otu izu.
Nke a bụ nnukwu ịrị elu nke ọrịa n'ime obere oge.
Ọ bụrụ na ikpe na-aga n'ihu na-arị elu, anyị nwere ike ịtụ anya ịbanye n'ọkwa nke anọ nke ọrịa n'ime izu ole na ole sochirinụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ngwa.
Nke a ekwesịghị iju anyị anya.
Ndị na-ahụ maka ọrịa na-efe efe na ndị na-ahụ maka ọrịa agwala anyị na anyị kwesịrị ịtụ anya ebili mmiri nke anọ na mbido Disemba.
Ndị ọkà mmụta sayensị gwakwara anyị ka anyị na-atụ anya ka a ga-enwe ụdịdị ọhụrụ.
Enwere ọtụtụ nchegbu gbasara ụdị Omicron, ma anyị amabeghị nke ọma ka ọ ga-esi eme na-aga n'ihu.
Otú ọ dị, anyị enweelarị ngwá ọrụ ndị anyị kwesịrị iji chebe onwe anyị pụọ na ya.
Anyị maara nke ọma banyere ụdị dị iche iche iji mara ihe anyị kwesịrị ime iji belata nnyefe na iji chebe onwe anyị pụọ na ọrịa siri ike na ọnwụ.
Nke mbụ, kacha ike, ngwá ọrụ anyị nwere bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ebe ọ bụ na ọgwụ mgbochi mbụ COVID-19 malitere na ngwụcha afọ gara aga, anyị ahụla ka ọgwụ mgbochi siri belata nke ukwuu ọrịa, ụlọ ọgwụ na ọnwụ na South Africa na n'ofe ụwa.
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-arụ ọrụ. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-azọpụta ndụ!
Kemgbe anyị malitere mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ọha na May 2021, a na-enye ihe karịrị nde ọgwụ mgbochi 25 na South Africa.
Nke a bụ mmezu dị ịrịba ama.
Ọ bụ enyemaka ahụike kachasị ukwuu emere na obodo a n'ime obere oge.
Pasent iri anọ na otu nke ndị okenye anatala opekata mpe otu ọgwụ mgbochi, yana pasenti 35.6 nke ndị South Africa toro eto na-agba ọgwụ mgbochi megide COVID-19.
N'ụzọ dị ịrịba ama, pasent 57 nke ndị dị afọ 60 na karịa bụ ndị a gbara ọgwụ mgbochi zuru oke, na pasent 53 nke ndị nọ n'agbata afọ 50 na 60 bụ ndị a gbara ọgwụ mgbochi zuru oke.
Ọ bụ ezie na nke a bụ ọganihu a na-anabata, ezughị ezu iji nyere anyị aka ibelata ọrịa, gbochie ọrịa na ọnwụ ma weghachite akụ na ụba anyị.
Ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19 bụ n'efu.
N'abalị a, ọ ga-amasị m ịkpọ onye ọ bụla a na-enyebeghị ọgwụ mgbochi ka ọ gaa n'ọdụ ọgwụ mgbochi dị nso na-egbu oge.
Ọ bụrụ na o nwere onye n'ime ezinụlọ gị ma ọ bụ n'etiti ndị enyi gị na-adịghị agba ọgwụ mgbochi, a na m akpọ gị ka ị gbaa ha ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi.
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ụzọ kachasị mkpa iji chebe onwe gị na ndị gbara gị gburugburu megide ụdị Omicron, iji belata mmetụta nke ebili mmiri nke anọ na iji nyere aka weghachite nnwere onwe mmekọrịta anyị niile na-achọsi ike.
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dịkwa mkpa maka nlọghachi nke akụ na ụba anyị n'ọrụ zuru oke, na ịmalitegharị njem, na mgbake nke akụkụ ndị na-adịghị ike dị ka njem nlegharị anya na ile ọbịa.
Emebere mmepe nke ọgwụ mgbochi anyị nwere megide COVID-19 ekele maka nde mmadụ nkịtị bụ ndị wepụtara onwe ha itinye aka na ule ndị a iji kwalite ihe ọmụma sayensị maka abamuru nke mmadụ.
Ha bụ ndị egosila na ọgwụ mgbochi ndị a dị mma ma dị irè.
Ndị a bụ ndị dike anyị.
Ha na-esonye n'òtù ndị ọrụ nlekọta ahụike bụ ndị na-ebute ụzọ n'ọgụ a na-alụso ọrịa a nso nso afọ abụọ, na ndị na-aga n'ihu na-elekọta ndị ọrịa, ndị na-aga n'ihu na-enye ọgwụ mgbochi, na ndị na-aga n'ihu na-azọpụta ndụ.
Anyị kwesịrị ịdị na-eche banyere ndị nwere obi ike mgbe anyị tụlere ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Site na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ bụghị naanị na anyị na-echebe onwe anyị, ma anyị na-ebelata nrụgide na usoro nlekọta ahụike anyị na ndị ọrụ nlekọta ahụike na ibelata ihe ize ndụ ndị ọrụ ahụike na-eche ihu.
South Africa, dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ, na-eleba anya ọgwụ mgbochi maka ndị nọ n'ihe ize ndụ kachasị na ndị nkwado nwere ike ịbara uru.
A na-enye ndị ọrụ nlekọta ahụike na nnwale Sisonke, ọtụtụ n'ime ha gbara ọgwụ mgbochi ihe karịrị ọnwa isii gara aga, na-enye Johnson & Johnson nkwado doses.
Pfizer etinyela akwụkwọ na South Africa Health Product Regulatory Authority maka usoro nke atọ ka a ga-enye ya ma emechaa usoro izizi dose abụọ.
Kọmiti Ndụmọdụ ndị Minista na-ahụ maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa egosilarị na ọ ga-atụ aro ka ewebata ihe nkwalite n'usoro na-amalite na ndị agadi.
A na-ahapụ ndị ọzọ nwere ọrịa mgbochi ọrịa, dị ka ndị na-agwọ ọrịa kansa, akwara dialysis, na ọgwụgwọ steroid maka ọrịa na-alụso ọrịa ọgụ, na-anabata ndị dọkịta ha.
Dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu, dị ka ụlọ ọrụ, na dịka gọọmentị, anyị nwere ọrụ iji hụ na ndị mmadụ niile nọ na mba a nwere ike ịrụ ọrụ, njem na mmekọrịta n'enweghị nsogbu.
Ya mere, anyị na ndị mmekọ mmekọrịta ọha na eze na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe na iwebata usoro ndị na-eme ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụrụ ọnọdụ maka ịnweta ọrụ, mmemme ọha, ụgbọ njem ọha, na ụlọ ọrụ ọha.
Nke a gụnyere mkparita ụka na-eme na NEDLAC n'etiti gọọmentị, ndị ọrụ, azụmahịa, na mpaghara obodo, ebe enwere nkwekọrịta sara mbara maka mkpa usoro ndị ahụ.
Gọọmenti ewepụtala otu ọrụ ga-eme nyocha sara mbara maka ime ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụrụ iwu maka mmemme na ebe dị iche iche.
Ndị otu ọrụ ahụ ga-akọrọ kọmitii Inter-Ministerial on Vaccination nke onye osote onye isi oche na-eduzi, nke ga-enye ndụmọdụ maka Cabinet maka ụzọ ziri ezi na nke ga-adigide maka iwu ọgwụ mgbochi.
Anyị na-aghọta na iwebata usoro ndị dị otú ahụ bụ ihe siri ike ma dị mgbagwoju anya, ma ọ bụrụ na anyị emeghị nke a n'ụzọ siri ike na dị ka ihe dị mkpa, anyị ga-anọgide na-adị mfe na ụdị ọhụrụ dị iche iche ma nọgide na-ata ahụhụ ọhụrụ ebili mmiri nke ọrịa.
Ngwá ọrụ nke abụọ anyị ga-alụ ọgụ maka ụdị ọhụrụ a bụ ịga n'ihu na-eyi mkpuchi ihu mgbe ọ bụla anyị nọ n'ọha ọha na ndị mmadụ na-abụghị ezinụlọ anyị.
Enwere nnukwu ihe akaebe ugbu a na iyi akwa mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi ihu ọzọ dabara adaba n'imi na ọnụ bụ ụzọ kacha mma isi gbochie mbufe nje site n'otu onye gaa na nke ọzọ.
Ngwá ọrụ nke atọ anyị ga-alụ ọgụ ọhụrụ dị iche iche bụ nke dị ọnụ ala na nke kachasị ukwuu: ikuku ọhụrụ.
Nke a pụtara na anyị aghaghị ịgbalịsi ike ka anyị nọrọ n’èzí mgbe anyị zutere ndị na-abụghị ndị ezinụlọ anyị.
Mgbe anyị na ndị ọzọ nọ n'ime ụlọ, ma ọ bụ n'ụgbọ ala, bọs na tagzi, anyị kwesịrị idowe windo ka oghe iji hụ na ikuku nwere ike ịfefe n'ime oghere.
Ngwá ọrụ nke anọ anyị nwere iji lụso ụdị ọhụrụ ahụ ọgụ bụ izere nnọkọ, karịsịa nnọkọ ime ụlọ.
Ọgbakọ ndị mmadụ dị ka nnukwu ọgbakọ na nzukọ, ọkachasị ndị chọrọ ka ọtụtụ mmadụ na-akpachi anya ruo ogologo oge, kwesịrị ịgbanwe ka ọ bụrụ usoro nke ọma.
A ga-eyigharị oriri ngwụcha nke afọ na matric raves na ngwụcha afọ yana mmemme ndị ọzọ, onye ọ bụla kwesịrị iche echiche ugboro abụọ tupu ya agawa ma ọ bụ hazie nnọkọ.
N'ebe a na-eme nnọkọ, a ga-ahụrịrịrịrị usoro iwu COVID niile dị mkpa.
Mmekọrịta ọ bụla ọzọ anyị nwere na-abawanye ohere anyị nwere ibute ọrịa ma ọ bụ ibunye onye ọzọ.
Mụnna South Africa,
National Coronavirus Command Council zutere ụnyaahụ iji tụlee ịrị elu ọrịa na-adịbeghị anya yana mmetụta nwere ike ịdị na ụdị Omicron.
Nke a sochiri nzukọ mbụ taa nke Council Coordinating Council na Cabinet nke Onye isi ala, ebe e kpebiri na obodo ahụ ga-anọrịrị na Coronavirus Alert Level 1 ugbu a yana na National State of Dister ga-anọrịrị.
N'ime mkpebi ịghara ịmanye ihe mgbochi ọzọ n'oge a, anyị tụlere eziokwu ahụ bụ na mgbe anyị zutere ebili mmiri nke ọrịa gara aga, ọgwụ mgbochi enweghị ebe niile, yana mmadụ ole na ole ka a gbara ọgwụ mgbochi.
Otú ahụ ka ọ dịkwa. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị maka onye ọ bụla dị afọ 12 na karịa, n'efu, n'ọtụtụ puku saịtị n'ofe obodo ahụ.
Anyị maara na ha na-egbochi ọrịa siri ike na ụlọ ọgwụ.
Anyị makwaara na coronavirus ga-anọnyere anyị ogologo oge. Ya mere, anyị ga-achọ ụzọ isi jikwaa ọrịa na-efe efe ma na-amachi ọgbaghara na akụ na ụba yana hụ na ọ ga-aga n'ihu.
Agbanyeghị, ụzọ a agaghị adịte aka ma ọ bụrụ na anyị amụbaghị ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ bụrụ na anyị anaghị eyi mkpuchi, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị agbasoghị usoro nlekọta ahụike bụ isi.
Anyị niile kwesịrị icheta na n'ihe gbasara ụkpụrụ ọkwa ọkwa 1:
A ka nwere iwu ịlọta site n'elekere iri na abụọ nke abalị ruo elekere anọ nke ụtụtụ.
Ihe karịrị mmadụ 750 nwere ike ịgbakọta n'ime ụlọ yana ihe karịrị mmadụ 2,000 nwere ike ịgbakọta n'èzí.
Ebe ebe mgbakọ ahụ dị obere iji nabata ọnụọgụ ndị a na ndapụ mmekọrịta ọha na eze kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ enweghị ike iji ihe karịrị pasenti 50 nke ikike ebe mgbakọ ahụ.
A naghị anabata ihe karịrị 100 mmadụ n'ebe olili ozu, na nche abalị, nnọkọ olili ozu, na 'mgbe anya mmiri gachara.
Ikpuchi ihe mkpuchi n'ebe ọha na eze ka bụ iwu, na ịghara iyi ihe mkpuchi mgbe achọrọ ya ka bụ mmebi iwu.
A na-anabata ire mmanya na-aba n'anya dịka ọnọdụ ikike oge niile siri dị, mana enweghị ike ere ya n'oge awa ị na-alọta.
Anyị ga-enyocha ọnụ ọgụgụ ọrịa na ụlọ ọgwụ n'ime ụbọchị ndị na-abịa ma nyochaa ọnọdụ ahụ n'ime izu ọzọ.
Ọ ga-adị mkpa ka anyị chọpụta ma usoro ndị dị ugbu a zuru oke ma ọ bụ na ọ dị mkpa ka eme mgbanwe na iwu ndị dị ugbu a.
Anyị amalitela usoro imezigharị iwu ahụike anyị ka anyị wee nwee ike nyochaa ojiji nke Iwu Nlekọta Ọdachi iji jikwaa nzaghachi anyị na ọrịa na-efe efe, n'ebumnuche n'ikpeazụ ibuli National State of Desaster.
Anyị ga-emejuputa atụmatụ mweghachi nke mba anyị iji hụ na ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ ndị ọzọ dị njikere maka ebili mmiri nke anọ.
Anyị na-elekwasị anya na nchịkwa ụlọ ọgwụ dị irè, ịkpọtụrụ kọntaktị na nyocha, nlekọta ahụike dị irè, nnweta ndị ọrụ ahụike.
Iji hụ na akụrụngwa anyị adịla njikere, akwa ụlọ ọgwụ niile dị ma ọ bụ achọrọ n'oge ebili mmiri nke atọ nke COVID-19 na-eme atụmatụ ma kwadebere maka ebili mmiri nke anọ.
Anyị na-arụkwa ọrụ iji hụ na ọkọnọ oxygen dị na akwa niile edobere maka nlekọta COVID-19.
Anyị ga-aga n'ihu na-eduzi World Health Organisation na njem mba ụwa, nke na-enye ndụmọdụ megide mmechi nke oke ala.
Dịka ọtụtụ mba ndị ọzọ, anyị enweelarị ụzọ iji jikwaa mbubata ụdị dị iche iche na mba ndị ọzọ.
Nke a gụnyere ihe achọrọ ka ndị njem wepụta asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yana ule PCR na-adịghị mma emere n'ime awa iri asaa na abụọ nke njem, yana na a na-eyi ihe mkpuchi maka oge njem.
Anyị nwere nkụda mmụọ nke ukwuu site na mkpebi nke ọtụtụ mba machibido njem site n'ọtụtụ mba ndịda Africa na-esote njirimara nke ụdị Omicron.
Nke a bụ ọpụpụ doro anya na nke na-ezighi ezi site na ntinye aka nke ọtụtụ mba ndị a mere na nzukọ nke mba G20 na Rome n'ọnwa gara aga.
Ha kwere nkwa na nzụkọ ahụ na ha ga-amalitegharị njem mba ofesi n'udo na n'usoro, dabere n'ọrụ ndị otu mba ụwa dị mkpa dịka Healthtù Ahụ Ike ,wa, International Civil Aviation Organisation, International Maritime Organisation, na OECD.
Nkwupụta G20 Rome kwuru na ọnọdụ nke ngalaba njem nlegharị anya na mba ndị ka na-emepe emepe, ma kwe nkwa ịkwado "ngwa ngwa, nkwụsi ike, ntinye na mgbake nke mpaghara njem nlegharị anya".
Mba ndị amachibidoro njem njem na obodo anyị na ụfọdụ mba ụmụnna anyị ndịda Afrịka gụnyere United Kingdom, United States, European Union members, Canada, Turkey, Sri Lanka, Oman, United Arab Emirates, Australia, Japan, Thailand, Seychelles. , Brazil, na Guatemala, n'etiti ndị ọzọ.
Mgbochi ndị a ezighi ezi na ịkpa oke n'ụzọ na-ezighi ezi megide obodo anyị na mba anyị ndị nwanyị South Africa.
Ọ bụghị sayensị mara mmachi nke njem, ma ọ bụ na ọ gaghị adị irè n'igbochi mgbasa nke ụdị a.
Naanị ihe mmachibido iwu na njem ga-eme bụ imebi akụ na ụba nke mba ndị ọ metụtara ma mebie ikike ha nwere ịzaghachi na mgbake na ọrịa na-efe efe.
Anyị na-akpọku obodo niile ahụ machibidoro iwu njem na obodo anyị na mba anyị na ndịda Afrịka ka ha gbagharịa mkpebi ha ngwa ngwa ma wepụ mmachibido iwu ha machiri tupu e mebie akụnụba anyị na ihe ndị obodo anyị.
Enweghị nkwado sayensị maka idobe ihe mgbochi ndị a n'ọnọdụ.
Anyị maara na nje a, dị ka nje niile, na-eme mgbanwe ma na-etolite ụdị ọhụrụ.
Anyị makwaara na ohere nke ntoputa nke ụdị dị iche iche siri ike na-abawanye nke ukwuu ebe ndị mmadụ anaghị agba ọgwụ mgbochi.
Ọ bụ ya mere anyị ji sonyere ọtụtụ mba, otu na ndị mmadụ gburugburu ụwa bụ ndị na-alụ ọgụ ka ha nweta ọgwụ mgbochi nha anya maka onye ọ bụla.
Anyị ekwuola na ahaghị nhata ọgwụ mgbochi ọ bụghị naanị na-efu ndụ na ihe eji ebi ndụ na mba ndị a na-anabataghị mana na ọ na-eyikwa mbọ zuru ụwa ọnụ iji merie ọrịa a.
Mpụta nke ụdịdị Omicron kwesịrị ịbụ oku na-akpọte ụwa na enweghị ike ikwe ka ahaghị nhata ọgwụ mgbochi gaa n'ihu.
Ruo mgbe a gbara onye ọ bụla ọgwụ, onye ọ bụla ga-anọ n'ihe ize ndụ.
Ruo mgbe a gbara onye ọ bụla ọgwụ, anyị kwesịrị ịtụ anya na ọtụtụ ụdị ga-apụta.
Ụdị dị iche iche ndị a nwere ike ibufe karịa, nwere ike ibute ọrịa ka njọ, yana ikekwe na-eguzogide ọgwụ mgbochi ugbu a.
Kama igbochi njem, mba ndị bara ọgaranya nke ụwa kwesịrị ịkwado mbọ nke akụ na ụba na-emepe emepe iji nweta na imepụta ọgwụ mgbochi zuru oke maka ndị ha n'egbughị oge.
Mpụta nke ụdị Omicron na ịrị elu na nso nso a mere ka o doo anya na anyị ga-ebi na nje a ruo oge na-abịa.
Anyị nwere ihe ọmụma, anyị nwere ahụmahụ na anyị nwere ngwá ọrụ iji jikwaa ọrịa a, ịmaliteghachi ọtụtụ ọrụ anyị kwa ụbọchị, na iji wughachi akụ na ụba anyị.
Anyị nwere ikike ikpebi ụzọ obodo anyị ga-esi.
Onye ọ bụla n'ime anyị kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Onye ọ bụla n'ime anyị kwesịrị ime usoro ahụike ahụike dị ka iyi ihe mkpuchi, ịsa aka ma ọ bụ na-asachapụ aka anyị mgbe niile, na izere oghere ndị mmadụ juru na nke mechiri emechi.
Onye ọ bụla n'ime anyị kwesịrị iburu ibu ọrụ maka ahụike nke ya na ahụike nke ndị gbara anyị gburugburu.
Onye ọ bụla n'ime anyị nwere ọrụ ọ ga-arụ.
Ọrịa ọjọọ a agaghị emeri anyị.
Anyị amalitela ịmụta ibi ndụ na ya.
Anyị ga-atachi obi, anyị ga-emeri na anyị ga-eme nke ọma.
Chukwu gozie South Africa ma chebe ndi ya.
Ana m ekele gị.
The Network Njem Nleta Ụwa na Ndị njem nlegharị anya nke Africa a na-akpọ oku maka nkesa nha nha nke ọgwụ mgbochi yana mgbanwe iji mesie ike ụgbọ elu mba ụwa nwere nchekwa na COVID019
WTN na-akpọ oku maka ikike ịgba ọgwụ mgbochi ụwa yana nkesa nha anya
Ntuziaka WTN: Otu esi eme njem na New Covid Strain Omicron?